मालपोतमा हाकाहाकी घूस- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
बारा — भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय कलैयामा कर्मचारीले कामै पिच्छे घूस माग्ने गरेको सेवाग्राहीले गुनासो गरेका छन् । दृष्टिबन्धक पुकुवा गराउन मालपोतमा पुगेका उमेशलाल दास झन्डै ३ घण्टासम्म लाइनमा बसे ।
आफ्नो पालोमा उनले कागजपत्र बुझाए तर कर्मचारीले लिन मानेनन । उनीभन्दा पछाडि आएका बिचौलियाले दिएको फाइल तुरुन्तै सदर भयो ।
‘लामो समयसम्म मेरै आँखा अगाडि यो प्रक्रिया चलिरह्यो,’ बारा नागरिक समाजका अध्यक्ष उमेशलाल दासले भने, ‘कर्मचारीको घूस्याहा प्रवृत्तिका कारण धेरै सेवाग्राही समस्यामा छन ।’ कर्मचारीको बदमासीको कारण आजित भएर सर्वसाधारण सेवाग्राही मालपोतको काम आफैं नगराएर बिचौलियाको जिम्मा लगाउन बाध्य रहेको उनले जानकारी दिए ।
बिचौलियाले एकैछिनमा घूसको बलमा काम गराइदिन्छन् । सेवाग्राहीलाई काम गराउन कर्मचारीको ईशारा कुर्दा कुर्दै दिन बित्ने गर्छ नाम नछाप्ने सर्तमा अर्का सेवाग्रहीले गुनासो गरे । बेलाबेलामा अख्तियारले छापा मार्ने र घूससहित कर्मचारीलाई पक्राउ गर्ने घटनाक्रम बढेपछि कर्मचारीले बिचौलियाबाट कागजात सहितको फाइलमै घूस लिने नयाँ युक्ति लगाएका हुन ।
कर्मचारीले घूस नलिउन भन्ने उद्देश्यले निगरानी गर्न मालपोत कार्यालयको प्रायः सबै स्थानमा सिसी क्यामरा जडान गरिएको छ । तर कर्मचारीले सिसी क्यामराबाट बच्न फाइलमै पैसा लिने गरेको प्रत्यक्षदर्शीले बताए ।
कार्यालयको डिआर (दर्ता नं.) र पुर्जा प्रिन्ट गराउन फोटो खिचेर दर्ता नं. लिने स्थानमा दुईवटा काम गरेवापत २ सय रुपैयाँ, रसिद काट्ने ठाउँमा टोकन लिँदा सय रुपैयाँ, लिखत प्रमाणित गराउन सय रुपैयाँ र मठ फाँटमा पनि सय रुपैयाँ फाइलमै राखेर काम गराउन बिचौलियाले कर्मचारीलाई घूस दिन्छन । त्यति मात्र होइन ५ बजेपछि बिचौलियाको फाइलको काम गर्दा कर्मचारीले लेट फाइनको नाममा प्रतिफाइलबाट ५ सय रुपैयाँदेखि १ हजार रुपैयाँसम्म लिने गरेको स्रोतले जानकारी दियो ।
एउटा फाइलको काम पूरा गराउन बिचौलियाले यसरी ५ सय रुपैयाँ काम गरेवापत घूस रकम लिन्छन । यसरी एक दिनमा काम गराउँदा कर्मचारीले बिचौलियाबाट ५० हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँको हाराहारीमा घूस लिने गरेको नाम नछाप्ने सर्तमा एक बिचौलियाले जानकारी दिए ।
प्रकाशित : असार ३, २०७६ ०९:५२
असार ३, २०७६ सम्झना रसाइली
तनहुँ — व्यास नगरपालिका–१३ को सुढेगाउँमा बिजुली बत्ती पुगेको छ । टुकीको भरमा बस्दै आएका स्थानीय विद्युतीकरणसँगै खुसी भएका छन् । विद्युत् प्राधिकरण तनहुँ वितरण केन्द्रले ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत गाउँका १३ घरमा विद्युत् सेवा विस्तार गरेको हो ।
विद्युतीकरणका लागि १५ लाख रुपैयाँको लगानीमा १५ केभीएको ट्रान्सफर्मर जडान गरिएको वितरण केन्द्रका प्रमुख शिव गोशेलीले बताए । व्यास–१४ नाल्दीघाटका करिब २५ घर अझै अन्धकारमा रहेकाले आगामी वर्ष विद्युतीकरणको तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ । जिल्लाका ७८ हजार घरमध्ये १५ प्रतिशत घरधुरीमा अझै पनि विद्युत् विस्तार भएको छैन
। गोशेलीले भने, ‘विद्युतीकरण हुन बाँकी रहेका घरमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि काम सुरु हुनेछ । यसका लागि ३ वटा सबस्टेसन बनाउने तयारीमा छौं ।’ बन्दीपुरको साराङघाटमा ८ एमबीएको सवस्टेसन निर्माण भइरहेको छ ।
उक्त सवस्टेसनबाट आँबुखैरेनीसम्म १९ किमि दूरी लाइन तानेर आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका विद्युत् नपुगेका गाउँमा विद्युत् सेवा पुर्‍याइनेछ । साथै सोही सबस्टेसनबाट नयाँ फिडर निकालेर देवघाट गाउँपालिकाको कोटा, वैदी, छिपछिपे लगायतका ग्रामीण बस्तीमा विद्युत् सेवा विस्तार गर्ने योजना वितरण केन्द्रले बनाएको छ ।
बुद्धसिं फिडरमार्फत आँबुखैरेनी गाउँपालिका–५ र ६, बन्दीपुर गाउँपालिका–६ को खहरे, व्यास नगरपालिका–१४ नाल्दीघाटलगायतका बुद्धसिं मार्गका छेउछाउका बस्तीमा विद्युतीकरण गरिने प्रमुख गोशेलीले जानकारी दिए ।
विद्युतीकरणका लागि घिरिङ गाउँपालिका र शुक्लागण्डकी नगरपालिकाको खैरेनीटारमा ८/८ एमबीएको सवस्टेसन निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको र सोही सबस्टेसनबाट त्यस भेगका ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युत् पुर्‍याइने भएको छ । केन्द्रले भोल्टेज नपुगेका बस्तीमा ट्रान्सफर्मर थप गरिरहेको छ । बन्दीपुर गाउँपालिकामा ४, भानु नगरपालिकामा ४, व्यास नगरपालिकामा ७ ठाउँमा र म्याग्दे गाउँपालिकामा नयाँ ट्रान्सफर्मर थप गर्ने कार्यालयले जनाएको छ ।
जिल्लाको दमौली, डुम्रे, आँबुखैरेनी सबस्टेसन निर्माण भइसकेको र घिरिङ, खैरेनीटार, साराङघाटमा सवस्टेसन निर्माण गरी ४५ एमभीए बराबरको सवस्टेसन निर्माण गर्ने लक्ष्य कार्यालयले लिएको छ । ठाउँका सबस्टेसन निर्माणपछि जिल्लाका सबै ठाउँमा विद्युत् सेवा पुग्नेछ ।